Te hianatra hanozona toy ny Rosiana? Misy kaonty Instagram natokana ho an’izany. · Global Voices teny Malagasy
Rakibolana Rosiàna-Kanadiàna natao hovakian'ny maso, mankalaza ny teny ratsy rosiàna.
Voadika ny 20 Janoary 2021 5:37 GMT
Pikantsary avy amin'ny kaonty ”Instagram” Curselikearussian , nahazoana alàlana.
Mety ho tolokevitra hafahafa ny fanandramana manozona amin'ny fiteny iray izay tsy tenindrazanao, fa kosa ho an'ireo izay te-hanandrankandrana dia efa misy kaonty ”Instagram” mampianatra ireo izay miteny anglisy ny fomba fanozonana amin'ny teny rosiana.
Tanjona tratrarin'ny curselikearussian ny hampianatra ny mpampiasa ny “мат“, araka ny iantsoana ity tahirina teny ratsy amin’ny fiteny rosiana sy amin'ny fiteny slavy hafa ity. Ny teny hoe “мат” dia avy amin'ny fiteny Rosiana mahazatra “Ёб твою мать”, izay midika hoe “P*** ny reninao”.
Nolavina nandritra ny vanim-potoana sovietika ny “мат” na dia be mpampiasa amin'ny fiainana andavanandro aza , taorian'ny nianjeran'ny Firaisana Sovietika tamin'ny taona 1991 indray vao nekena ny fampiasana azy. Nandalina be azy io ireo manampahaizana sy mpanazava heviteny (mpanao rakibolana). Voarara any Rosia ny fampiasana ny мат eny amin'ny toerana natao ho an'ny daholobe tamin'ny 2014 teo ambanin'ny andininy 20.1.1 amin'ny fehezan-dalàna momba ny fandikandalàna, izay manondro azy io ho toy ny fihetsika jiolahimboto (hooliganisme) sy mametraka sazy ara-bola na fisamborana ireo meloka. Midika izany fa voasivana ireo fotoana nitenenana ny “мат” tany anaty sarimihetsika, amin'ny haino aman-jery, ary koa amin'ny adihevitra ampahibemaso na lahateny.
Tsy nahasakana ny fanozonana tsy hivoatra tany Rosia sy ny toejavatra hafa amin'ny fiteny maro izany rehetra izany: ny mpiteny Kyrgyz, ohatra, nandatsaka ny fiteny rosiana мат ho ao amin'ny fiteny Kyrgyz mba hahomby kokoa.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices, nilaza ireo mpamorona ny “curselikearussian“, ilay Rosiana mpanao gazety Elmira Kuznetsova sy ilay Kanadiàna artista mpanao hatsikana sy sarimiaina Jess Pollard, fa ny tanjon'izy ireo dia ny hanome voninahitra ny harena ary ny fahaizamamorona ananan'ny fanimbazimbàna Rosiàna — ary koa hanasongadinana ny fahasarotany. Nohazavain'i Kuznetsova ny niandohan’ny zavatra rehetra :
Mianatra Rosiana i Jess ary indray hariva dia nandramako ny nandika ho azy ilay ozona rosiana hoe “На хую я вертел.” “Tsy raharahako” no dikan'ilay andianteny, fa ny dikany ara-bakiteny dia “Ahodiko eo ambonin'ny maha-lehilahy ahy”. Nanao sary sketch iray i Jess izay natao hihomehezana fotsiny, mampiseho zavatra sendra nahodina eo ambonin’ny taovam-pananahana lahy. Nihomehy mafy izahay noho ilay sary sy ny maha-kidaladàla ilay fandikàna ara-bakiteny ka nanapa-kevitra ny hanao sary fanehoana betsaka kokoa. Izany no niteraka ny boky an-tsary izay nantsoinay hoe “An Illustrated Treasure of Russian Curses” (Tahiry sarobidy misy ireo ozona rosiàna nohaingoana sary), izay natao pirinty ary nanaovana dika 50 ka namidinay tamin'ireo namanay ihany.
Tamin’ny Oktobra 2020, namorona kaonty ”Instagram” izy ireo mba hampiroboroboana io boky io. Avy eo, namporisihan'ireo namany sy ny mpiara-miasa aminy, natombok'izy ireo ny fanampiana ilay angona. Manana mpanaraka maherin'ny 50.000 ny kaonty ankehitriny.
Nangatahina izy ireo mba hanome ny teny tena tiany , namaly i Pollard hoe :
Nanazava tamiko ny mpampianatra rosianina ahy fa ny “Я скучаю по тебе” midika hoe malahelo anao aho, nefa koa misy ifandraisany amin'ny teny hoe “mankaleo” : amin'ny lafiny iray, saika hitenenanay ihany koa hoe “very ny zotom-poko hiaina raha tsy eo anao “. Na niteraka fihomehezana betsaka aza ny fianarana ny teny Rosiana, dia hitako ihany koa fa fiteny tena tsara ary sarotra izy io.
Ho an'i Kuznetsova, ny ozona Rosiana tsara indrindra aminy dia ny “сказочный долбоёб”, izay midika hoe “vehivavy janga manintona”. Nankamamiany ihany koa io teny io satria anisan’ny anton'ireo raharaham-pitsaràna nahatsikaiky maro tany Russia.
Raha nanontaniana ny fomba niatrehan'izy ireo ny fanamby amin'ny fandikana fomba fiteny tena hafahafa, dia hoy i Kuznetsova sy Pollard hoe :
Ny fandikana teny isaky ny voanteny sy ny tena ara-bakiteny indrindra no ataonay amin'ireo ozona. Ka tsy dia ilaina loatra ny mindrana. Haingana dia haingana ny fizotrany, na dia misy aza ny tranga ahitana teny rosiana fototra na ny fananganana fitsipi-pitenenana mitaky fampifanarahana mba hitazomana ny dikany amin'ny teny anglisy. Nisy fotoana izahay, nahalany ora iray, niasa tamin’ny fehezanteny “Хуем груши околачивать”. Tsy vitanay ny nandray fanapanakevitra hoe “to knock off” na “to knock from” no teny anglisy mitahiry kokoa ny hevitrin’ilay matoanteny. Tsy nahita ny marimaritra iraisana izahay raha tsy nanasa ny namana kanadiaàna iray manana maripahaizana ‘’Master’’ amin'ny teny anglisy hiditra tamin'ity adihevitra mafana ity.
Nomarihin'i Pollard, fa ny fandikan-teny dia afaka manambatra ny lafiny fiteny sy ny endrika hita maso:
Betsaka ny lafin-javatra tokony hodinihina rehefa mandika teny: ny fikorinany, ny hatsikana, ny dikany ary ny lafiny mampihetsi-po. Efa karazana fandikana teny manohana ny fehezanteny ny sary fanaingoana. Tokony ho faly ve io toetra io? Tezitra? Gaga ve? Misy sosona fanampiny raha ampifandraisintsika miaraka ireo fiteny roa: indraindray azo “tohanana” amin'ny fehezanteny anglisy mampientam-po ny fandikana ny teny ozona, toy ny “whackerfucker” (izay taratry ny fanamboarana ny hoe “motherfucker” , izany no antony nisafidiananay ny tsy hanampy tsipi-panohizana eo anelanelany “whacker” sy ‘’fucker’’). Na dia mahatonga ny fandikàna ho marina sy mora takarina ho an'ireo mpiteny anglisy aza izany, resy lahatra io fandikan-teny io ireo Rosiàna sasany mpankafy anay fa ny “whackerfucker” dia tena teny anglisy. Angamba tsara loatra ilay fandikan-teny … Ity no famotsifotsiana be indrindra nataoko nandritry ny resadresaka nifanaovana tamiko. Mipararetra ny tanako!